ईपिएलमा क्रिश गेलको पारिश्रमिक आईपिएलको भन्दा धेरै , पहिलो पटक भयो मुल्यको खुलासा - News20 Media
February 2, 2020 N20LeaveaComment on ईपिएलमा क्रिश गेलको पारिश्रमिक आईपिएलको भन्दा धेरै , पहिलो पटक भयो मुल्यको खुलासा
काठमाण्डाै : आसन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिगका लागि वेष्ट इन्डिजका विस्फोटक खेलाडी क्रिस गेल नेपाल आउने पक्का भएको छ । गेललाई पोखरा राइनोजले इपीएलका लागि नेपाल ल्याउने लागेको हो ।
लामो समयको प्रयासपछि गेलले ईपीएल खेल्न राजी भएको पोखरा राइनोजले जनाएको छ । उनी पोखराको आइकनिक खेलाडीसमेत रहेका छन् । ईपीएलको सफलताले गर्दा गेलले नेपालमा खेल्न राजी भएको टिमका मालिक दिपा अग्रवालले बताउनुभयाे । उनलाई नेपाल ल्याउनका लागि ६ महिना मेहेनत गरेको टिमको भनाइ छ । गेल नेपाल आएपछि सबैले सेलिब्रेसन गर्ने इपीएल आयोजक जोरा स्पोर्टस म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक आमिर अख्तरले बताउनुभयाे ।
गेलको मूल्य कति ?
यतिबेला सबैलाई कौतुहल छ, पोखराले गेललाई भित्र्याउन कति रकम खर्चियो ? तर, ईपीएलको आयोजक र फ्रेन्चाइजले विदेशी खेलाडीहरुको खरिद मूल्य गोप्य राख्ने गरेका छन् । स्वदेशी खेलाडीसँग ठूलो अन्तराल भएकाले यस्तो गरिएको हुन सक्छ ।
यस विषयमा हामीले पोखरा राइनोजकी प्रमुख दीपा अग्रवालसँग प्रश्न गर्दा उनले खुलाउन नमिल्ने बताइन् । ‘ईपीएलमा विदेशी खेलाडीहरुको मूल्य सार्वजनिक नगर्ने नीति छ । त्यसैले म यसमा केही बताउन सक्दिनँ,’ उनले भनिन् ।
एउटा क्रिकेटिङ वेबसाइटले सूत्रको हवाला दिँदै ७० हजार डलरमा गेललाई किनिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । यसमा जमैकादेखि प्लेनको विजनेस क्लासमा आउजाउ र पाँचतारे होटलमा बसाइँ खर्चसमेत जोड्दा ८ अंकको रकम पुग्न सक्छ । अर्थात् एक करोडको नजिक । ईपीएलको कुनै पनि फ्रेन्चाइजका लागि यो रकम अथाह हो ।
यदि गेलका लागि एक करोड खर्चिन पोखरा राइनोज तयार भएको हो भने त्यो अत्यधिक महंगो मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकी ईपीएलमा एउटा टिमले अधिकतम ७ वटा म्याच खेल्ने हो । त्यसमा पनि गेलले २ वटा म्याच मात्रै खेल्ने सम्भावना रहेको बताइँदै छ । किनकी २९ मार्चबाट आईपीएल सुरु हुँदैछ । त्यसको सेड्यूलले ईपीएलमा गेलको सहभागिता प्रभावित बन्ने छ । गेलसँग सम्झौता गर्दा उनले कतिवटा म्याच खेल्न सक्छन् भन्नेबारे छलफल नभएको पोखरा राइनोजकी अग्रवाल बताउँछिन् ।
उनले भनिन्, ‘उहाँले कतिवटा म्याच खेल्नुहुन्छ भन्ने मात्रै महत्वपूर्ण होइन । उहाँको उपस्थिति नै ठूलो कुरा हो । उहाँ सबै म्याचमा उपस्थित हुन सक्नुभएन भने पनि हामीसँग रिप्लेसमेन्ट प्लेयरहरु हुनुहुन्छ ।’ आईपीएलमा गेललाई २ करोड भारु (२ करोड २० लाख रुपैयाँ) मा पञ्जाबले किनेको थियो । करिब दुई महिना चल्ने यो प्रतियोगितामा उनले अधिकतम १७ म्याच खेल्न सक्छन् । यस हिसाबले हेर्दा पोखरा फ्रेन्चाइजले उनलाई आईपीएलमा भन्दा पनि महंगोमा खरिद गरेको प्रतित हुन्छ । जबकि आईपीएल र ईपीएलका फ्रेन्चाइजले गर्ने आम्दानी तुलनायोग्य नै छैन ।
गेलजस्तो खेलाडीलाई नेपाल ल्याउन पोखरा राइनोजले देखाएको साहसलाई सह्राना गर्नुपर्छ । तर, अर्को सिजनमा पनि उनी वा उनी स्तरका खेलाडीलाई निरन्तरता दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै टड्कारो छ । नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान विनोद दासको भनाइमा फ्रेन्चाइजहरुले धान्न सकिने देखेर नै ठूलो लगानी गरी गेल लगायतका महंगा खेलाडीहरु भित्र्याएका हुन् ।
दास भन्छन्, ‘हाम्रो क्रिकेट पनि विस्तारै ग्लोबल हुने क्रममा छ । विश्वचर्चित खेलाडीहरुले ईपीएलमा सहभागिता जनाउँदा यसको मार्केट भ्यालु बढ्छ नै । यही विश्वासमा फ्रेन्चाइजहरुले लगानी गरेको हुनुपर्छ । यो नेपाली क्रिकेटका लागि राम्रो संकेत हो ।’
March 2, 2020 N20